Taleefanka ugu weyn ee Android Android | Androidsis
Telefoonka ugu weyn aduunka ee Android
Del Xarunta Android ee shirkadda Dell ee lagu magacaabo Mini 3i Waxaan ka wada hadalnay marmar laakiin marinkaan kadib markii la sameeyay wax ka badal kale ayaa noqday Mobilada Android ugu weyn adduunka.
Laga bilaabo laptop-ka Dell, waa la hagaajiyay iyadoo lagu daray shaashad taabasho oo 10-inji ah waxaana loo qaabeeyey sidii walaalkeed oo kale Dell Mini 3i ilaa ay u rogto telefoonka Mobilada Android ugu weyn dunida. Nidaamka Ophone -ka ayaa loo xardhay inuu ku shaqeeyo guntin x86 ah.
Sidaad arki karto, taleefanku kuma habboona in lagu qaado bacaha yaryar xafladaha lagu xidho madow ama loogu qaado jeebka surwaalka, laakiin hubaal suurtagal ma aha in si khalad ah loo riixo amar aan la rabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Telefoonka ugu weyn aduunka ee Android
Ku jawaab si lala
DoubleTwist, iswaafaji Itunes, sawirro iyo fiidiyowyo Android